China Hot iibinta tamaashiirta buufinta cad ee cawska, gidaarka, warshadeeyayaasha rinjiyeynta wadada dhinaceeda iyo alaab-qeybiyeyaasha | PENGWEI
Tamaashiirta buufinta kulul ee iibinta cawska, gidaarka, rinjiyeynta laamiga
Buufinta tamaashiirtayadu waxay ka samaysan tahay walax kiimiko ah oo tamaashiirta ku salaysan ee deegaanka u habboon. Waxay leedahay midabyo dhalaalaya, awood daboolan oo wanaagsan.
Nooca: Dhacdada & Alaabada Xaflada
Wakhtiga: Kirismaska, Qalinjabinta, Halloween, Sannadka Cusub
Nafaqada biyaha ku salaysan waxay tilmaamaysaa in lagu dabaqi karo meelo kala duwan. Iyadoo ay ugu wacan tahay waqtiyada isticmaalkeeda, waxaan inta badan ka dhignaa mid ku meel gaar ah oo la dhaqi karo.
Haddii aad doorbidayso rinjiyeynta, ha seegin! Isticmaal tamaashiirta buufinta buluugga ah ee muraayadda hufan ama sagxadaha siman ee leh midabyo isbarbar dhigaya oo ku dabool sagxadaha waaweyn qaababka sawir-qaadistaada.
Magaca Shayga Tamaashiirta cad buufinta / buufin tamaashiirta
Nambarka Model OEM
Miisaanka saafiga ah 80g
Cabbirka Awooda D: 45mm, H: 160mm
Cabbirka Xirmada: 42.5*31.8*20.6cm/ctn
Lacag bixinta T/T, 30% Hormarinta Deposit
Faahfaahinta Xirmada 6 midab baakad kala duwan. 48 pcs halkii kartoon.
1. Qashin qoyan ka dib marka la buufiyo, si degdeg ah u qalaji
2. Midabka cad ee qurxinta qurxinta
3. Muuqasho muddo dheer
4. Dadaal la'aan in lagu shaqeeyo, si sahlan looga saaro biyo
5. Iyadoo aan lahayn ur xajiin ah, tayada dammaanad qaaday
1. Si fiican u rux weelka tamaashiirta ah ugu yaraan 30 ilbiriqsi.
2. Ku calaamadee tamaashiirta buufinta meelaha u dhow, sida muraayadaha daaqadaha ee baararka ama makhaayadaha, laamiga, darbiga waddada, baabuur, cawska, sabuuradaha, dhulka...
3.Ka faa'iidayso rinjiga buufinta tamaashiirta ah ee midabada kale leh ee dhulka si aad u sawirto guri fudud oo aad la ciyaartid lammaanahaaga hopscotch.
4.Darbiyada dhismaha waxaa inta badan lagu daboolaa qoraallo hal abuur leh ama kuwo aan caadi ahayn (warqado/sawirro...). Waxaa laga yaabaa in odhaahyada feejignaanta leh ay yihiin caawiye fiican oo dadka si ay u aqoonsadaan waxa aan la garanayn.
5. Si fudud ugu dhaq tuubooyinka biyaha iyo burushka ama maro, ka dibna ku bilow abuuristaada cusub. Waxaa laga yaabaa in roobka soo noqnoqda uu midabada libdhi doono.
1.OEM waa la oggol yahay iyadoo lagu saleynayo shuruudahaaga.
2.Astaantaada ayaa lagu daabici karaa.
3.Shapes waxay ku jiraan xaalad qumman ka hor inta aan la dhoofin.
4.Different size waa la dooran karaa.
1. Weel cadaadis saaran yahay, ha ku xidhin dabka ama biyaha kulul;
2. Fadlan ku hay meel qabow oo qalalan, iska ilaali iftiinka qorraxda tooska ah;
3. Fadlan alaabtan ku isticmaal meel hawo fiican leh. Haddii si lama filaan ah indhaha loogu buufiyo, isla markiiba biyo ku raaci 15 daqiiqo. Haddii raaxo la'aantu sii socoto, raadso talo caafimaad isla markiiba;
4. Fadlan ka ilaali meel aanay carruurtu gaadhin.
Hore: Haysashada fudud ee qaboojiyaha strawberry ee baabuurka, guriga iyo qolalka
Xiga: 250ml xaflad waalan oo midab leh oo lagu buufiyo baraf macmal ah oo loogu talagalay Halloween ama Habeenka Kirismaska
Tamaashiirta buufinta buluuga ah
Tamaashiirta buufinta cagaaran
Tamaashiirta buufinta guriga
Tamaashiirta ku-meel-gaadhka ah
Tamaashiirta buufin karo ee la dhaqi karo
Tamaashiirta buufinta cas ee rinjiyeynta iyo calaamadaynta
Qiimaha warshadda jumlada ah ee ku meel gaadhka ah ee tamaashiirta buluuga ah...
buufinta tamaashiirta midabka la dhaqi karo ee qurxinta